မြောင် သည် တရုတ်ပြည်တောင်ပိုင်းမှ လူမျိုးစုဖြစ်ပြီး တရားဝင်မျိုးနွယ်စု ၅၆ မျိုး အနက်မှတစ်ခု ဖြစ်သည်ဟု တရုတ်အစိုးရ မှအသိအမှတ်ပြုထားသည်။ မြောင်သည် တရုတ်စကားလုံးဖြစ်ပြီး အခြားသော မုံ၊ မှူ၊ ကျိုးရှုံ စာလုံးများအတွက် ကိုယ်ပိုင်စာလုံးပေါင်းပုံစံရှိပါသည်။
မြောင်လူမျိုးများသည် တရုတ်နိုင်ငံတောင်ပိုင်း၊ ကွေ့ကျိုး ၊ ယူနန်, စီချွမ်, ဟူပေး, ဟူနန်n, ကွမ်ရှီ, Guangdong နှင့် ဟိုင်နန်ပြည်နယ်များတွင်အဓိကအားဖြင့်နေထိုင်ကြပါသည်။ အထူးသဖြင့် မြောင်မျိုးနွယ်အုပ်စုများတွင် မုံလူမျိုးများသည် တရုတ်ပြည်မှအရှေ့တောင်အာရှ ( မြန်မာ (မြန်မာ)၊ ဗီယက်နမ် မြောက်ပိုင်း၊ လာအို နှင့် ထိုင်းနိုင်ငံ ) သို့ပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ကြသည်။ ၁၉၇၅ ခုနှစ်တွင် လာအိုကွန်မြူနစ်များသိမ်းပိုက်ပြီးနောက် မုံဒုက္ခသည်အမြောက်အများ သည်အမေရိကန် ၊ ပြင်သစ် နှင့် ဩစတြေးလျ နိုင်ငံများရှိအနောက်နိုင်ငံများတွင်အခြေချနေထိုင်ခဲ့ကြသည်။
အမည်ရောနှောနေသည်: မြောင် သို့မဟုတ် မုံ လူမျိုး
သမိုင်းကြောင်းအရ Miao ဟူသောဝေါဟာရသည်ဟန်လူမျိုးမဟုတ်သောလူအမျိုးမျိုးနှင့်ကိုက်ညီမှုမရှိသောအသုံးအနှုန်းများဖြစ်သည်။ အစောပိုင်းတရုတ်အခြေစိုက်အမည်များသည်အမျိုးမျိုးသောမှတ်တမ်းများကိုအသုံးပြုသည်။ Miao, Miao-tse, Miao-tsze, Meau, Meo, mo, Miao-tseu စသည် အရှေ့တောင်အာရှအခင်းအကျင်းတွင်တရုတ် "Miao" မှဆင်းသက်လာသောစကားလုံးများသည်ထိုဒေသတွင်နေထိုင်သောလူမျိုးကွဲများကဲ့ရဲ့ရှုတ်ချသည့်သဘောသက်ရောက်ခဲ့သည်။ မင်မင်းဆက် (၁၃၆၈-၁၆၄၄) တွင်ထိုဝေါဟာရကိုပြန်လည်ပေါ်ပေါက်လာခြင်းဖြစ်ပြီးထိုအချိန်ကယင်းကို "ရိုင်းစိုင်းတဲ့" ဟုအဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုခဲ့သည်။ Nanman ၏ကွဲပြားမှုတစ်ခုဖြစ်သောကြောင့်၎င်းသည်တရုတ်ယဉ်ကျေးမှုနှင့်မပတ်သက်သောတရုတ်တောင်ပိုင်းရှိဌာနေတိုင်းရင်းသားများကိုရည်ညွှန်းသည်။ ဤအချိန်အတောအတွင်းအကျွမ်းတဝင်မရှိသော (g Sheng) နှင့်အကျွမ်းတဝင် (u Shu) Miao ကိုညွှန်းဆိုခြင်းမှာအုပ်စုနှစ်စု၏ဝါသနာတူမှုနှင့်နိုင်ငံရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်ကိုရည်ညွှန်း။ ၎င်းတို့အားခွဲခြားရန်ပိုမိုလွယ်ကူစေသည်။ အဆိုပါ Qing မင်းဆက် (1644-1911) သည်အထိပိုမိုထုစပါးခွဲခြားအရေးအသားပေါ်လာပါဘူး။ ထိုအချိန်တွင်ပင်၊ မည်သည့်လူမျိုးစုအမျိုးအစားခွဲခြားမှုတွင်ပါဝင်သည်ကိုပိုင်းခြားသိမြင်ခြင်းသည်ရှုပ်ထွေးနိုင်သည်။ နိုင်ငံရေးအရပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကိုဆန့်ကျင်သောမုံလူမျိုးများ၏သမိုင်းကြောင်းအရ Miao လူမျိုးစုများကိုဟောင်ဟူသောဝေါဟာရအရပေါင်းစည်းလိုက်ခြင်းကြောင့် Miao ဟူသောအသုံးအနှုန်းသည်ယုတ်ညံ့သောအသုံးပြုမှုကြောင့်ဖြစ်သည်။ သို့သော်မျက်မှောက်ခေတ်တရုတ်နိုင်ငံတွင်မူမိုအိုပြည်သူများနှင့် ပတ်သက်၍ ထိုအသုံးအနှုန်းကိုဆက်လက်အသုံးပြုခဲ့သည်။ 
အကြားတစ်ဦး "Miao-Tse" ကသူ့ရဲ့ဖေါ်ပြခြင်း Stielers လက်-Atlas, 1891 ကနေအသေးစိတ်, Guiyang နှင့် Guilin
"The countries of birth and ethnicities of Australia's Hmong and Lao communities: an analysis of recent Australian census data" (30 March 2010). Journal of Lao Studies: 55–85. Retrieved on 16 July 2017.
Yang၊ Kou (2010)။ Commentary: Challenges and Complexity in the Re-Construction of Hmong History (in en)။
Chih-yu Shih (2002)။ Negotiating ethnicity in China: citizenship asaresponse to the state။ Psychology Press။ p. 133။ ISBN 0415283728။ 2010-06-28 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Frederick W. Mote (1988)။ The Cambridge history of China: The Ming dynasty, 1368-1644, Part 1။ Cambridge University Presslocation=။ p. 380။ ISBN 0521243327။ 2010-06-28 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Shih-shan Henry Tsai (1996)။ The eunuchs in the Ming dynasty။ SUNY Press။ p. 16။ ISBN 0791426874။ 2010-06-28 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Barbara Watson Andaya။ The Flaming Womb: Repositioning Women in Early Modern Southeast Asia။
舌尖上的中国：正宗苗家古法腌鱼，可保存上10年不变质 (in zh)။